I-Free Forex VPS | Ukuthengiswa kwe-Forex Virtual Server yangasese
Ikhaya / Izipesheli ze-forex / Iziphakamiso ze-Forex Overview / I-VPS yamahhala
Ku-FXCC sinikeza amaklayenti ethu ikhono kanye nendawo yokudayisa ngokusebenzisa amasevisi we-VPS (amasevisi e-server yangasese). Kunezinzuzo ezintathu eziyinhloko ezibalulekile ekusebenziseni i-VPS ukuthuthukisa ukusebenza kwezokuhweba; isivinini, ukuphepha nokufinyeleleka. Nansi isifushanqo esifushane ngasinye.
I-FXCC inikeza i-VPS ukubamba njengendlela ekhethekayo futhi ephathekayo ehlukile yokuthola ukuvinjelwa kokusondelene okusheshayo okutholakala kakhulu kwezicelo zokuhweba. Ukuletha i-latency ephansi futhi okuqinisekisayo ukuxhuma okusheshayo phakathi kwaba: abathengisi, ama-platforms abadayisi abakhulu kanye namanethiwekhi wezezimali njenge-ECNs ye-FXCC, kubangelwa ukukhishwa kwe-trade-order ngokuphawulekayo.
Kungakhathaliseki ukuthi ukuhweba kwi (MetaTrader) noma (noma ngokusebenzisa), noma usebenzisa isofthiwe ye-bespoke backend kanye nesofthiwe yokuhweba, ukuphepha kuyisici esibucayi sezohwebo ze-VPS. Kukhona ukuzuza okuzuziwe okuzuzwe njengefa kanye nokuthuthukiswa okuzokwenziwa ngokulayisha izinhlelo zokusebenza zesofthiwe ohlelweni oluyimfihlo olukude futhi izifanekiso ze-Windows 'Server VPS zivuselelwa ngokuqhubekayo ukuze zivikele zombili amaseva nabasebenzisi abasuka ku-intruders nezinye izinsongo. Ngokuphathelene ne-hardware engokwenyama, kunakekelwa okukhulu ukuvimbela ukwehluleka okubalulekile. Amaseva abanjwe kanye nezinkampani zenethiwekhi eyinhloko zibukwa i-24 / 7 ngezinkinga futhi zilawulwa ngokucophelela i-24 / 7 ngokubambisana namaqembu okusekela ezobuchwepheshe.
Ukuba nesiphakeli sakho esizinikezele ukuqhuba izicelo zakho zokuhweba, kusiza ukuqinisekisa ukuhamba kahle kokuhweba kwakho. Uma, ngokwesibonelo, ubesebenzisa iwebhusayithi yakho yokuthenga ekhaya, awuyikusingatha kukhompyutha yakho yasekhaya, kungakhathaliseki ukuthi kuyashesha futhi kungakhathaliseki ukuthi uxhumano lwakho lwe-fiber optic broadband lungaba lula kangakanani. Ungayibamba kuseva ezinikezele, lapho amakhasimende akho ayengalawula imikhiqizo yakho ngokushesha nangempumelelo ngangokunokwenzeka, njengokuphepha ngangokunokwenzeka futhi ufinyelele emakethe yakho amabili amahora amane ngosuku. Imakethe yakho ayikwazanga ukuvala uma uvala ikhompyutha yakho yasekhaya ne-broadband ubusuku bonke. Isimo esifanayo sokufinyelela lapho uhweba; uma isebenza izinhlelo ezizenzekelayo kufanele zihwebe i-24-7, iseva / s njalo kudingeka ilungiselelwe futhi izinikezele kunsizakalo yakho eyodwa, ukuhweba.
Amathuluzi nama-protocols ngokuvamile akhiwe kusevisi ye-VPS jikelele, njengokufinyelela okude kude neDeskithophu evumela abasebenzisi ukuba baxhumane kalula kwi-server yabo abazinikezele - i-VPS kunoma yikuphi, ngaphandle kokusetha okungeziwe, noma ukucushwa okudingekayo. Abathengisi bangafinyelela kuma-platforms okuhweba avela kumadivaysi ahlukene: Ama-PC, ama-laptops, amaphilisi, nama-smartphones, ngaphandle kokuphazamisa isofthiwe esebenza ku-VPS. Ukusebenzisa amapulatifomu amaningi we-VPS nama-akhawunti amaningi angasethwa ku-VPS efanayo, ukudlulisela ukufinyelela komsebenzisi, ukuze kuvumele abasebenzisi abaningi ukuba babuke ideskithophu ngesikhathi esisodwa, i-alos ingasetshenziswa, kusukela ezindaweni ezihlukene.
Ukufaka isicelo se-VPS yakho yamahhala, vele ungene ngemvume ku-Hub Hub, funda Imigomo Nemibandela futhi wenze isicelo sakho.
Thola iVPS yethu